တစ်ဦး HARD DRIVE ကိုပြုပြင်ဖို့ကိုဘယ်လို - HARD DISK ကို - 2019
အချို့ကိစ္စများတွင်သင် drive ကို၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြန်လာခွင့်ပြုတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, - hard drive ကိုပြန်လည်ပြုပြင်။ ကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လေးနက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြင်ပေးဖို့စက်ကိရိယာ၏သဘောသဘာဝဖို့များသောအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှသည်မဟုတ်, အဆုတ်ပြဿနာတွေအထူးကုမှမသုံးပဲဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။
သင်၏လက်နှင့်အတူ hard drive ကိုပြန်လည်ပြုပြင်
ဟာ operating ပြည်နယ်မှ HDD ပြန်ပြောင်းပင်က BIOS ကိုမြင်နိုင်သည်မဟုတ်ဘယ်မှာကိစ္စများတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်မကြာခဏဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံစံဒီဇိုင်း၏ရှုပ်ထွေးမှု drive ကို fix မှမရ။ အချို့ကိစ္စများတွင်, ပြုပြင်ခြင်းဟာ hard drive ကို၏ကုန်ကျစရိတ်ထက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သာ. ကြီးတစ်ခုငွေပမာဏကိုပေးစေခြင်းငှါထိုသို့လိုအပ်သောဖြစ်စေခြင်းငှါ, ကသာကပေါ်သိမ်းဆည်းထားအရေးပါ data တွေကို restore လုပ်ဖို့လုပ်ဖို့သဘာဝကျပါတယ်။
ဒါဟာပြုပြင်တို့အကြားကသူ၏ပြန်လည်နာလန်ထူအပေါ် hard drive ကိုခွဲခြားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအမှု၌ကျွန်တော်တစ်ဦး device ကိုချွတ်ယွင်း၏ပွနျလညျထူထောငျအကြောင်းပြောနေတာ, ဒုတိယကြသည် - ဆုံးရှုံးသွားသောအချက်အလက်များ၏ပြန်လာဘို့။ သငျသညျကြောင့်ဖိုင်တွေပုံစံမှဖျက်ပစ်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ recover ဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားဆောင်းပါးများထုတ်စစ်ဆေး:
ပိုများသော: hard disk ထဲကပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကို recover လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဆော့ဝဲ
သင်တို့သည်လည်းသင်တို့လက်နှင့်အတူ hard drive ကိုအစားထိုးရန်နိုင်ပြီး, ဖြစ်နိုင်လျှင်သစ်ကိုတဦးတည်းမှအဟောင်းကို HDD ကနေဖိုင်တွေကော်ပီကူးရန်။ ဒါဟာအထူးကုနှင့်တိုင်ပင်ရန်ဆန္ဒရှိကြဘူးတဲ့သူတွေကိုအသုံးပြုသူများအတွက်သင့်လျော်သည်နှင့်ရုံပျက်ကွက် drive ကိုဖယ်ရှားပစ်ရကြိုက်နှစ်သက်သည်။
သင်ခန်းစာကို: သင်၏ PC နဲ့ Laptop ကိုအပေါ် hard disk ကိုအစားထိုး
ပြဿနာ 1: ပျက်ဆီးနေသော hard disk ကိုကဏ္ဍ
ကျိုးကဏ္ဍ software နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးကိုအလွယ်တကူအမျိုးမျိုးသော utilities များကပြန်လည်ရနိုင်ပြီး, HDD ၏ရလဒ် stably နှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ပြေးအဖြစ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အ hard drive ကို2အမှားများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်နည်းလမ်းများနှင့်အကျိုးကဏ္ဍ
ကုသမှုအစီအစဉ်များကိုမသုံးပါဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကောင်းတဲ့ကဏ္ဍများဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, drive ကိုသူ့ဟာသူ uncharacteristic အသံထုတ်ဝြေခင်းစတင်နိုင်ပါသည်: ပြဿနာများကိုတခြားသရုပ်အနက်ကိုနှိပ်ခြင်းအား squeaking, rustling, etc - ရိုးရှင်းသောတာဝန်များကို, ဖိုင်များသို့မဟုတ်ဖိုလ်ဒါဆုံးရှုံးမှု, ဒါမှမဟုတ်ဗလာထဲကအသုံးမပြုတဲ့အာကာသ၏အသွင်အပြင်ဖျော်ဖြေပင်အခါ system ကိုဆွဲထား ..
ဤပြဿနာကို hard drive ဒါမှမဟုတ် Laptop ကိုကွန်ပျူတာကိုမကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင် fix ။ ထို့ကြောင့်, အသုံးပြုသူများအရေးကြီးသောဒေတာများလွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်မာစတာန်ဆောင်မှုကိုအထူးအခြေအနေများအောက်တွင်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပျက်စီးနေသောမျက်နှာပြင်ကနေအချက်အလက်တွေကိုပြန်လည်သုံးစွဲဖို့အသစ်တစ်ခုနှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်အတူ hard drive ကိုအစားထိုးဖြစ်စေရှိသည်။
crystal Disk ကိုအင်ဖို;
ဗစ်တိုးရီးယား HDD ။
device ကိုနေတုန်းပဲ run နေပေမယ့်မတည်မငြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ကသစ်တစ်ခု drive ကိုဝယ်ယူစဉ်းစားရန်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလိုအပ်ပေသည်။ တစ်ဦးပျက်စီးသွားသော HDD နဲ့ PC ကိုအသုံးပြုခြင်းအားပြင်းထန်စွာ minimize လုပ်ဖို့အကြံပြုသည်။
တစ်စက္ကန့် hard drive ကိုဆက်သွယ်ပြီးနောက်, သငျသညျကိုသာတစ်ခုလုံးကို HDD ဒါမှမဟုတ် operating system ကို clone နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး hard disk ကို clone လုပ်နည်း
တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား hard disk ကိုမှစနစ်ရွှေ့ပြောင်းခြင်း
ပြဿနာ 2: Windows ကို drive ကိုမမြင်ရပါဘူး
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချွတ်ယွင်း drive ကိုအခြားကွန်ပျူတာသို့ချိတ်ဆက်ပင်သောအခါ, operating system ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပေမယ့် BIOS ကိုမြင်နိုင်ဖြစ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
Windows ကို device ကိုအနည်းငယ်မမြင်ရပါဘူးဘယ်မှာအခြေအနေများ:
အဘယ်သူမျှမ drive ကိုစာတစ်စောင်။ ဒါဟာအရာ၏ system ကိုမြင်နိုင်ဖို့ငြိမ်းလိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အသံအတိုးအကျယ်, စာလုံး (C, D, E ကို, etc) မပါဘဲဖြစ်နေဆဲကြောင်းဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ များသောအားဖြင့်ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံချပေးရှိပါတယ်ကူညီပေးသည်။
သင်ခန်းစာကို: အဘယျအ disk ကို format လုပ်နှင့်မည်သို့မှန်စေရန်ဖြစ်ပါသည်
သငျသညျကိုပြန်ရချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒီနောကျ, အထူးအစီအစဉ်များကိုသုံးပြီး data ကိုဖျက်ပစ်။
အသေးစိတ်: ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကို recover လုပ်ဖို့အစီအစဉ်
အဆိုပါ disc ကိုပု RAW format ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့သော်လည်း, ဒီအခြေအနေကိုဖြေရှင်းရန်အကူအညီပုံစံချမှုနှင့် - ၎င်း NTFS သို့မဟုတ် FAT file system ကိုပြန်လာနိုင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားဆောင်းပါး၌ဤအကြောင်းကို Read more:
သင်ခန်းစာကို: RAW HDD drive တွေကို၏ပုံစံကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows ကိုအသစ်က hard drive ကိုမမြင်ရပါဘူး။ ရုံဝယ်ယူနှင့် HDD သည့်စနစ်ယူနစ်ချိတ်ဆက်မှုစနစ်ကဆုံးဖြတ်, ဤလုံးဝပုံမှန်မရနိုင်ပါ။ device ကိုစတင်သုံးစွဲဖို့, သင်ကစတငျဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာကို: အ hard disk ကိုစတငျဖို့ကိုဘယ်လို
ပြဿနာ 3: BIOS ကို drive ကိုမမြင်ရပါဘူး
ပိုပြီးလေးနက်ကိစ္စများတွင်ယင်း hard drive ကိုလည်ပတ်မှုစနစ်, ဒါပေမယ့်လည်း BIOS ကိုမသာမြင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ထို BIOS ကိုပင်သူတို့အား Windows တွင်သတ်မှတ်ကြသည်မဟုတ်သည်လူအပေါင်းတို့ကိုချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကိုယ်ထိလက်ရောက်အလုပ်လုပ်ပေမယ့်ဆော့ဖ်ဝဲပဋိပက္ခရှိကွောငျးတွေ့နိုင်ပါသည်။
device ကို, BIOS ထဲမှာသတ်မှတ်မထားပါအခါ, ဖြစ်ရပ်အများစု၌ဤအကြောင်းရင်းနှစ်ခုထဲကတစ်ခု၏အကျိုးဆက်သည်:
အဆိုပါ mainboard / Motherboard ကပြဿနာမလျော်ကန်သော connection ကို
, စမ်းသပ်ရန်ကွန်ပျူတာဖြုတ်, စနစ်အဖုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဂရုတစိုက် hard drive ကိုအနေဖြင့် Motherboard ကပြေး cable ကိုချိတ်ဆက်မှုကိုစစ်ဆေးရန်။ wire ကိုသူ့ဟာသူစစ်ဆေးခြင်း - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှု, ဖုန်မှုန့်, မြေမှုန့်ရှိ, မရှိ။ မားသားဘုတ်ပေါ်တွင် socket Check, cable ကိုကတင်းကျပ်စွာကပ်လျက်ကြောင်းသေချာပါစေ။
ဖြစ်နိုင်လျှင်အခြားဝါယာကြိုးသုံးပါနှင့် / သို့မဟုတ်, အခြား HDD ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ Motherboard က socket ရှိမရှိစစ်ဆေးလျက်, BIOS ကိုအတွက် hard drive ကိုလျှင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ကြိုးစားကြည့်
အဆိုပါ hard drive ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာ install လုပ်ထားပြီဆိုရင်တောင်စစ်ဆေးဆက်သွယ်မှုနေဆဲလိုအပ်ပေသည်။ အဆိုပါ cable ကိုရိုးရှင်းစွာ BIOS ကို device ကို detect မနိုင်စေအသိုက်ထဲကနေပျောက်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
စည်းကမ်းနှင့်အမျှအရာအမှု၌သင်တို့ကို PC မှာ start အခါအသုံးပြုသူကလစ်နားထောင်မည်အကြောင်းနှင့်က HDD က၎င်း၏အလုပ်စတင်ရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုဆိုလိုပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကမတတျနိုငျအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှု၏, ထို့ကြောင့် Windows ကို, သို့မဟုတ် BIOS ကိုမ device ကိုမမြင်ရပါဘူး။
ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးမှာ disk ပေါ်မှ data ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်မည်။
ပြဿနာ 4: အဆိုပါ hard disk ကို drive ကိုဖုံးခေါက်
သငျသညျအတွင်းရှိ hard drive ကို၏သံကိုကွားလြှငျ, က controller ကိုပျက်စီးခဲ့ကြဖွယ်ရှိသည်။ တခါတရံတခုထပ်တိုး hard drive ကို, BIOS များကတွေ့ရှိရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
သငျသညျလုံးဝ controller ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်သလောက်ပါစေ။ အထူးပြုကုမ္ပဏီများသည်ထိုကဲ့သို့သောပြုပြင်ရေးထွက်သယ်ဆောင်ပေမယ့်တစ်လှည့်လည်ပေါင်းလဒ်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သခင်ကိုရည်ညွှန်းသောကြောင့်သာသတင်းအချက်အလက်များအလွန်အရေးကြီးပါသည်ယင်း disk ပေါ်မှာသိမ်းထားတဲ့အခါအမှု၌သဘာဝကျပါတယ်။
ပြဿနာ 5: HDD ထူးဆန်းတဲ့ဆူညံသံစေသည်
ပုံမှန်ပြည်နယ် drive ကိုခုနှစ်တွင်စာဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အရေးအသားစဉ်အတွင်းဆူညံသံ မှလွဲ. အသံမပါစေသင့်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦး creaking uncharacteristic, ကော့စကားကိုနားထောငျလြှငျ, နှိပ်လိုက်ရင်, ခေါက်သို့မဟုတ်ကုပ်ခြစ်ပါကအလျင်အမြန်တတ်နိုင်သမျှပျက်စီးနေသော HDD ကို အသုံးပြု. ကိုရပ်တန့်ဖို့ဘယ်လိုအလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်ပြီး drive ကို, BIOS ထဲမှာသတ်မှတ်လို့မရနိုင်ပါ, ရုတ်တရက် unwind မှစတင်နိုင်ရန်ကြိုးစားနေမအောင်မြင်အပြန်အလှန်ရပ်တန့်သို့မဟုတ်။
တစ်ဦးတည်းကဒီအမှု၌ပြဿနာကိုအလွန်ခက်ခဲသည်ရှာဖွေရေးမှာ။ ကျွမ်းကျင်တစ်ခုမှာအမှား၏အရင်းအမြစ်အဆုံးအဖြတ်များအတွက် disassembly device ကိုလိုအပ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အဆိုပါစာမေးပွဲရလဒ်များကိုအခြေခံပြီးပျက်စီးသွားသောဒြပ်စင်ကိုအစားထိုးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဤသည်ဦးခေါင်း, ဆလင်ဒါ, ပန်းကန်သို့မဟုတ်အခြားဒြပ်စင်များဖြစ်နိုင်သည်။
drive ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင် - အလွန်အန္တရာယ်များသောသိမ်းပိုက်။ ပထမဦးစွာသင်အမြဲပြုပြင်ကြရန်လိုအပ်ပါသည်သောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်သူတို့ကိုယ်သူတို့နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ ဒုတိယအချက်မှာ drive ကိုခေါ်ခဲ့ဖို့ကြီးမားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏လက်ကြိုးစားကြချင်လျှင်မူကား, သင်ပိုင်ခွင့် hard drive ကို disassembly နှင့်၎င်း၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူကျွမ်းနှင့်အတူစတင်သင့်ပါတယ်။
Read more: အဆိုပါ hard disk ကို drive ကို disassemble လုပ်နည်း
Disassembly အမျိုး, သင်နှင့်သိုလှောင်ထားသည့်ဒေတာဆုံးရှုံးဖို့ကြောက်လန့်စက်ရဲ့ပျက်ကွက်ဖြည့်စွက်ဖို့အဆင်သင့်မဟုတျပါသို့မဟုတ်ပြီးသား backup တစ်ခုဖန်ဆင်းသောဖြစ်ရပ်အတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်လိမ့်မည်။
ပြဿနာ 6: Winchester ကတဖြည်းဖြည်းအလုပ်စတင်
မြန်နှုန်းလျှော့ချရေး - user က hard drive ကိုအခြို့သောအမှားရှိတယ်လို့ခံစားမိပါလိမ့်မယ်အရာအဘို့အခြားဘုံအကြောင်းရင်း။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, HDD, solid state drive (SSD) ကိုမတူဘဲ, အချိန်မြန်နှုန်းနှင့်အတူလျှော့ရန်မစိတ်သဘောထားရှိပါတယ်။
HDD ကို non-optimized parameters တွေကို;
ပေါရာဏကွန်နက်ရှင် mode ကို။
သင်ခန်းစာကိုဘယ်လို hard drive ကို performance ကိုတိုးမြှင့်ဖို့
hard drive - တုန်ခါမှုသို့မဟုတ်ပြိုလဲဖြစ်စေ, မည်သည့်ပြင်ပရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုကိုပျက်စီးရန်အလွန်လွယ်ကူကြောင်းတစ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သော device ကို။ သို့သော်အချို့ကိစ္စများတွင်ကဂရုတစိုက်နှင့်လုံးဝအနုတ်လက္ခဏာအချက်များထဲကနေခွဲထုတ်စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးလျှင်ပင်ကိုချိုးဖျက်နိုင်ပါ။ HDD ဝန်ဆောင်မှု၏သက်တမ်းနှင့် ပတ်သက်. 5-6 နှစ်ကဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အလေ့အကျင့်ထဲမှာမကြာခဏပိုမြန်2ကြိမ်ပျက်ကွက်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဖြစ်သင်အရေးပါသောအချက်အလက်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုဂရုစိုက်ဖို့တိုးရပါမယ်, ဥပမာအဘို့, HDD, USB flash drive ကိုသို့မဟုတ် cloud storage သုံးစွဲဖို့တစ်ဦးအပိုဆောင်း၏မျက်မှောက်၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသည်က၎င်း၏ပွနျလညျထူထောငျရည်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များနှင့်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များဆုံးရှုံးထံမှသင်တို့ကိုကယ်တင်ပါလိမ့်မယ်။
ဗီဒီယို Watch: Mufti Kannada Dubbed Hindi Full Movie 2017. ShivaRajkumar, SriiMurali. 2018 Sandalwood Action Movie (သြဂုတ်လ 2019).